प्रकाशित: २०७५-११-२८ १४:५३:०१ नेपाल समय
मनोविद् गोपाल ढकालका अनुसार मेनिया मुडमा आउने गडबडी हो । यसलाई भावनात्मक गडबडी पनि भन्न सकिन्छ। डिप्रेसन र मेनिया दुवै मानसिक रोग हुन्। कडा मानसिक रोग भएका कारण मानिसको जीवन नै अस्तव्यस्त हुनेगर्छ। उनी भन्छन्, ‘आफूले आफूलाई राजा, सम्राट् वा माता सम्झिनेहरु सबै मेनियाका रोगी हुन्।’ मेनिया हाइपर र हाइपो मेनिया गरी धेरै प्रकारका छन्। जस्तै हाइपो मेनिया भएका बिरामीले भने माता चढेको, भगवान्ले दर्शन दिए, शृंगार गर्ने, धर्म र राजनीतिक कुरा बढी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखाउने गर्छन्। गाउँघरमा भन्ने चलन पनि छ कि 'औंसीपुर्ने लाग्यो।' जुन यसैलाई भनिन्छ। मनोवैज्ञानिक भाषामा यसलाई ‘बाइपोलर मुड डिस अर्डर’ भनिन्छ। कसैलाई मेनिया मात्र हुने र कसैलाई डिप्रेसन मात्र हुन्छ भने कतिपयलाई मेनिया डिप्रेसन हुन्छ।
बाँस्कोटा–मिश्र अडियो प्रकरणः के भयो दिनभर ?
१ बाँस्कोटा–मिश्र अडियो प्रकरणः के भयो दिनभर ?
२ विरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएकोमा कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण
३ सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री खतिवडालाई
४ एनआईसी एसिया बैंकको न्यू चमत्कारिक बचत खाता योजना
५ पशुपतिमा शिवरात्रीको तयारी पूरा, दुई करोडको फूलले सिंगारियो